Klear Unganidzo: Kufuridzira Kushambadzira CRM uye Campaign Yekutevera | Martech Zone
Klear Unganidzo: Kufuridzira Kushambadzira CRM uye Campaign Yekutevera
Mugovera, March 23, 2019 Mugovera, March 23, 2019 Douglas Karr
Klear, hunyanzvi hwekushambadzira hunowedzera Klear Unganidzo, mhinduro izere yekufurira maneja manejimendi Kubudirira kwakakosha kwekushambadzira kwevanokurudzira - kune ese maviri mabhenji uye vanokurudzira. Klear anopindura mubvunzo:
Unoita sei kuti uteedzere zvese?
Unganidzo inoratidzira kutaurirana pakati pemakemikari nevanokurudzira kuburikidza nekugadzirisa manyorerwo echirongwa mukati mechirongwa chehupenyu hwehupenyu neyakafambiswa yekutaurirana sevhisi uye kugona kubatira pane zvemukati, uye kuteedzera kubhadhara uye Instagram Nhau.
Klear Unganidzo inogonesa mabhenji kusimudzira hunyanzvi hwehukama uye mushandirapamwe kubudirira, kusanganisira kugona ku:
Kubhururuka: Shandisa zvigadzikiso zvipfupi matemplate ekupa vanokurudzira vako nemazano anodikanwa ekumhanyisa mushandirapamwe wako
Kubvumirana KweProjekiti: Ruramisa kutaurirana neyakafambiswa yekutaurirana sevhisi kuti ugare uchigara uchisangana nevanokurudzira, goverana uye bvumidza mazano ekugadzira, uye uteedzere pamushandirapamwe wako wazvino
Zvibvumirano: Tumira uye usaine zvibvumirano zvisina kunetsa
Kubhadhara Kuchengeta: Aggregate kubhadhara uye kuwedzerwa kwemari zvakananga
Tevera Nhau: Koka Vafuridzi kuti vatendese yavo Instagram nhoroondo yekugona kuongorora IG Nhau
Kugadzirisa zviitiko zvezuva nezuva zveanokurudzira mushandirapamwe zvinogona kuve zvinonetsa kune vatengesi, kunyanya kana mabhureki aine akawanda emishandirapamwe anomhanya panguva imwe chete. "Isu takagadzira Klear Connect kugadzirisa mashandiro aya kuitira kuti vashambadzi vawane mushandirapamwe wese munzvimbo imwechete, zvichibvumira chero munhu kuti atungamire zvese izvi kubva pakutanga kusvika pakupedzisira kusvika pachikuva cheKlear."
Eytan Avigdor, Klear CEO uye Co-muvambi
Mhinduro yaKlear ndeye inosangana inobatanidza mabrands uye vanokurudzira; Klear Connect yakagadziriswa kugadzirisa CRM zvido zvevashandisi nekugonesa kujeka kutaurirana. Iyo yekumanikidza yekushambadzira chikuva ikozvino inogonesa mabhizinesi kuwana, kubata, kuongorora, uye kutaurira kwavo kwevanokurudzira kushambadzira kubatidzira mune imwechete chikuva.
Unganidzo inopa mabhureki ane mapfupi matemplate eakajairwa echiratidzo mirau, zvinopihwa, uye zvinotarisirwa kuitira kuti mapato ese aenderane zvibodzwa Zvese zvinhu zvinokwanisa kugoverwa zvakananga nevanokurudzira kuburikidza neKlear Connect yakasanganiswa yekutaura sevhisi, nepo kufambira mberi kuchiteverwa nezviitiko zvenguva-chaiyo.
Pamusoro pezvo, zvigadzirwa zvinogona kukoka vanokurudzira kuti vabvumikise yavo Instagram account, vachibvumira kuteedzera kweAng Instagram Nhau. Nekudaro, kurerutsa iwo anokanganisa maneja mushandirapamwe kutenderera
Yakavambwa mu2011, Klear ndeye yakazara inosimudzira yekushambadzira mhinduro, ichipa vashambadzi kugona kuvaka, kuyera uye kuyera mapesheni ekukurudzira kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Iine dhatabhesi yakazara pamusika, Klear inoshandiswa pasirese nemakambani epamusoro eFortune 500, pamwe nekutungamira kwekushambadzira nemakambani ehukama neruzhinji. Nekwaniso yekuswededza mukati mavanokurudzira vashoma uye kuona vateveri venhema, software yekuhwina mubairo yaKlear chishandiso chakakosha kumagumo kusvika kumagumo chinopa vashambadzi simba kutanga mishandirapamwe yevanokurudzira. Parizvino Klear ine vashandi vanopfuura makumi matatu pasirese, nemahofisi muTel Aviv, New York, Chicago, neLondon.
Rongedza Klear Demo
Zvakakosha Webhu Dhizaini Matekiniki Ekubatanidza pane yako Mutemo Firm Webhusaiti
Maitiro eArtificial Intelligence Ari Kubatsira Mabhizinesi